SAWIRO:-Somaliland oo soo bandhigtey Ciidamo ka goostey Puntland - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:-Somaliland oo soo bandhigtey Ciidamo ka goostey Puntland
SAWIRO:-Somaliland oo soo bandhigtey Ciidamo ka goostey Puntland
Saraakiil ka tirsan Ciidamada kala duwan ee Soomaaliland iyo Maamulka Magaalada laas-Caanood ee Xarunta Gobolka Sool ayaa waxaa ay halkaasi kusoo dhaweeyeen Ciidamo la sheegay inay ka goosteen Maamulka puntland.
Ciidamadaan oo tiro ahaan gaaraya ilaa 30 Askari iyo taliyaha hoggaaminaya ayaa waxaa ay ahaayeen Ciidamada Puntland ee ka howlgeli jirey deegaanka Boocame ee Gobolka Sool,hayeeshee ku biirey Soomaaliland.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Soomaaliland iyo Maamulka Magalada Laas-Caanood ayaa waxaa ay sheegeen in Ciidamadaan xilligaan wixii ka dambeeya ay kamid yihiin Ciidamada Soomaaliland xaquuqna ku leeyihiin.
Taliyaha Ciidamada Puntland kasoo goostey hoggaaminaya ayaa dhankiisa sheegay in ay diyaar u yihiin inay ka qeyb qaataan sugida Amniga halka ay geyso Soomaaliland lana dagaalami doonana cid kasta oo falal amni darro wada.
Puntland iyo Soomaaliland ayaa mar walba waxaa ay soo bandhigaan Ciidamo kala duwan oo midba midka kale uu sheegayo in uu dhankiisa u soo goostay kana soo baxay Maamulkii kale.
Previous articleXiisad dagaal oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan
Next articleMashquulkii ugu badnaa oo ka jira Magaalada Dhuusamareeb